शिलापत्र संवाददाता धनुषा, १९ जेठ
प्रदेश २ मा कोरोना संक्रमितको संख्या ६ सय ९५ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ८२ जना नयाँ संक्रमित थपिएपछि सो संख्या ६ सय ९५ पुगेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत् जानकारी गराएका छन् ।
सो अवसरमा दिइएको जानकारीअनुसार सप्तरीमा १२ जना, महोत्तरीमा २ जना, सिरहामा ५ जना, सर्लाहीमा ३८ जना, धनुषामा ७ जना र रौतहटमा १८ जना गरी ८२ जना थपिएको हो । यस अवधिमा थपिएका सबै जना केही दिनअघि भारतबाट आएका थिए ।
यस प्रदेशमा आजसम्ममा १५ हजार ७ सय ७४ जनाको स्वाबको नमुना संकलन गरिएकामा १० हजार ३ सय ५१ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने ४ हजार ७ सय २८ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको सचिव डा. घिमिरेले जानकारी गराए । यस प्रदेशमा अहिलेसम्म ६ हजार ६८२ जना आरडीटी परीक्षण गरिएकामा ५० जना रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ ।
यस प्रदेशमा भारतबाट भित्रिनेको चाप बढ्दै गएपछि क्वारेन्टाइनको संख्या पनि थपिएको छ । क्वारेन्टाइनमा अहिले २२ हजार ९ सय १८, होम क्वारेन्टाइनमा ५ हजार २ सय ५ र आइसोलेसनमा ३ सय ९५ जना बसेका छन् । रासस
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १९, २०७७, २१:४०:००